လာရယ်သွားတယ် စိတ်ညစ်နေလို့ ဒိုင်တွေကလည်း သူတို့ကိုသူတို့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေများထင်နေသလားမသိး( စိတ်ပျက်စရာကြီး ရယ်နေပေမယ့် ၀မ်းနည်းနေတဲ့ မျက်လုံးကိုဖတ်ကြည့်သွားမိတယ် ။
Mar 11, 2009, 10:44:00 PM
very happy ,wellcome,go ahead
Mar 11, 2009, 11:01:00 PM
u r back. anyway, welcome.
For "just for laughts', I am wanna take this money :D
Mar 11, 2009, 11:15:00 PM
အကို့ ဆီရောက်ဖြစ်ပေမယ့် မန့် တာကတော့ပထမဆုံးပါ..
Mar 12, 2009, 2:01:00 AM
ပေါင်၅၀တောင်မှ ပါလား။ ဒါ အရွက် အကြီးဆုံးဘဲ တပတ်တ် စားစရတ် ၅၀ လောက်တာပေ့ါ တခါက ၅ကျပ်တန်နဲ့ တန်ဖိုး ၁၀၀၀ ပေါင်ဖိုး နဲ့စမ်းကြဖူးတယ်။ မီးရထား ၀န်ထမ်းတွေ စိတ်သဘောထား စမ်းတုန်းက တော့ ၂၂ပေါင်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် စမ်းဖူးတယ် ဘ်ယ် မီးရထားstation ၀န်ထမ်းမှ ငွေအပြည့် ပြန်မအပ်ဘူး။ တချို့ ဆို လုံးဝ ဖျောက်တယ်။ ငွေယူပြီး ကျန်တာ အပ်တာများတယ်
Mar 12, 2009, 3:37:00 AM
အကိုစေးထူးရေ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပါတယ် ခုတော့ အသံမထွက်အောင် ရယ်သွားတယ်
Mar 12, 2009, 4:16:00 AM
တင်ပေးထားတာတွေလည်း ကြည့်ရယ်သွားတယ်.. လူမည်းကောင်လေးသနားပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်မရယ်ပဲမနေနိုင်ဘူး..။
ပိုက်ဆံဆွဲခွာပြီးထွက်ပြေးတဲ့2ယောက်ကအရယ်ရဆုံးပဲ။
Mar 12, 2009, 6:07:00 AM
Mar 12, 2009, 7:22:00 AM
ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်တယ် ။ နောက် ပို့စ်တွေမှာ ရင်တွင်းဖြစ် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လေးတွေ လာတော့မယ် လို့ မျှော်နေပါတယ်။ အနုပညာစစ်စစ်လေးတွေပေ့ါ။
Mar 12, 2009, 7:41:00 AM
Welcome Back ပါဗျာ။
Mar 12, 2009, 8:22:00 AM
မန့်ပြီးပြန်မှ လူမည်းလေးကို ပြန်ကြည့်မိတာ သနားလိုက်တာဗျာ။
Mar 12, 2009, 8:37:00 AM
Mar 12, 2009, 11:16:00 PM
ဖတ်ရတာ ပျော်စရာ..း)
Mar 13, 2009, 12:07:00 AM
Mar 13, 2009, 8:04:00 PM
အဟင့် သီချင်းနားထောင်လို့ ရ၀ူး :(
Mar 15, 2009, 3:37:00 PM